Ihe ị ga-ahụ na Almería | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Almería, Ihe ị ga-ahụ
Anyị na-achọpụta n'oge a, ebe ndị anyị kwesịrị ịhụ na Mpaghara Almería, n’agbata Granada na Murcia. A nnukwu oghere na obodo mepere emepe nwere ọtụtụ akụkọ ntolite, mana ebe anyị ga-ahụ ọtụtụ oghere okike nke ga-efunahụ anyị.
Ebe amụrụ ndị ọdịda anyanwụ, nke onye ọ bụla nwere mmasị ruo ọtụtụ iri afọ, na oghere ebe a na-agbapụ ihe nkiri si na fim dịka Lawrence nke Arabia ma ọ bụ Indiana Jones. Anyị abụghị naanị ndị hụrụ na Almería ebe obibi dị oke ọnụ ahịa, nke nwere ọtụtụ ebe mmasị iji gaa.
1 Cabo de Gata ogige ntụrụndụ
2 Alcazaba na mgbidi ya
3 Katidral nke anụ ahụ
4 Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Almeria
5 Ebe ngosi mmanụ
6 Museumlọ ihe nkiri Guitar
7 Ọzara Tabernas
8 Ọdụ Fort Bravo
10 Sierra de los Filabres, nke dị na Sierra Leone
11 Ndagwurugwu Almanzora
12 Castle Macenas na Mojácar
13 Lọ nke San Felipe na Níjar
Cabo de Gata ogige ntụrụndụ
Onye na-anụbeghị banyere osimiri ndị dị ebube ma chebe Cabo de Gata ogige ntụrụndụ. Ebe mara nma juputara na gburugburu ebe echekwara ya ma burukwa oduru ala nke di na Mediterranean. Enwere osimiri ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ na ya iji nwee mmiri dị na Mediterenian, dịka Monsul beach, Playa de los Muertos or Playa de los Genoveses. E nwekwara ụfọdụ obodo ndị mara mma nke na-akụkarị azụ, dị ka San José ma ọ bụ Las Negras. N'ezie, anyị ga-eburu n'uche na ọ bụ oghere okike nke bara nnukwu uru nke a ga-elebara anya, ọkachasị ugbu a ọ bụ njem nleta.
Alcazaba na mgbidi ya
Alcazaba bụ isi ihe ncheta n'obodo Almería. Ọ bụ nnukwu ebe ewusiri ike nke ndi muslim na oke echiche nke obodo. Nwere ike ịga ije n'akụkụ mgbidi ya dị egwu ma nwee ọowụ Homage na Powder Towers. Ga-eche ihu iwu ndị Alakụba kachasị ukwuu nke ụdị a na Spain.
Katidral nke anụ ahụ
Ọ bụrụ na ị gara n'ihu n'obodo Almería, ị nwere nleta ọzọ dị mkpa. Ọ bụ Katidral nke Okike. Ọ bụghị katidral a na-ahụkarị, nke nwere mpụga achọ mma, mana kama ọ nwere ebe e wusiri ike, nwere nnukwu ụlọ elu nke ga-echetara anyị Alcazaba. N'ịbụ obodo nwere ọtụtụ azụmahịa, mwakpo ndị ohi mere ka ọ dị mkpa iji wulite katidral dị ka ezigbo ụlọ. N'ime ya enweworị ụdị ahụkarị na katidral.
Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Almeria
N'ime obodo anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ njem nleta ọdịbendị, dị ka Museum nke Almería. Ọ bụ nnukwu ihe mgbe ochie Museum nke iji ghọta ọkwa dị iche iche nke akụkọ ntolite. Enwere ọtụtụ ala nwere ihe ngosi na-egosi ihe anakọtara na-egwupụta, ma site n'oge Rom ma n'oge Arab nke Andalusian. Ebe kachasị mma iji soro ụmụaka.
Ebe ngosi mmanụ
Anyị na-aga n'ihu na nleta ọdịnala n'obodo Almería. N'oge a, anyị nwere ike ịga na Museum Museum, na etiti akụkọ ihe mere eme. Ọ bụ ihe igwe igwe ihe, ya bụ, igwe nri ọdịnala dị n’ụlọ ochie. Anyị ga-enwe ike ịmatakwu ihe banyere mmepụta nke ọla edo mmiri a nke anyị niile na-eji kwa ụbọchị.
Museumlọ ihe nkiri Guitar
El Museumlọ ihe nkiri Guitar Ọ bụ nke na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya, mana ọ bụ ebe dị mkpa maka ndị hụrụ egwu n'anya. Ọ dị n'azụ katidral ma na-enye ọtụtụ ime ụlọ nwere ngosi na ụlọ maka mmemme dị iche iche. Enwere olile anya na anyi ga-aga otutu emume ndia.
30 kilomita site na isi obodo bụ ama Ọzara Tabernas, ebe a họọrọ iji gbaa ọtụtụ ihe nkiri ọdịda anyanwụ, na nke ahụ enweghị obi abụọ yiri ka ọ ga-ebuga anyị na ntọala ndị a site na oge ọzọ. Ugbu a anyị nwere ike ịsị na ọ ka bụ ebe na-adọta maka ịma mma ya, ebe ọ bụ na ọ bụkwa ebe egwuregwu ama ama nke usoro Game of Thrones.
Ọdụ Fort Bravo
Na Desert Tabernas, enwere ihe ochie nke ihe nkiri ochie nke ọdịda anyanwụ, nke ghọworo ebe nlegharị anya na-adọrọ mmasị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ibuga gị na otu n'ime ihe nkiri ndị ọdịda anyanwụ a, ị nwere ike ịga Fort Bravo, ebe a na-akọ akụkọ ebe gị na ezinụlọ gị ga-anọkọ ụbọchị ahụ, yana ihe nkiri. Can nwere ike ịhụ ihe ngosi na ị ga-aga ije na ịnyịnya ịnyịnya na gburugburu.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime Sierra Nevada Ọ dị na mpaghara Granada, anyị nwere ike ịsị na akụkụ nke Almería dịkwa. Ọ bụ ya mere mpaghara ugwu a sitere na atụmatụ dị mkpa maka mpaghara ahụ. Ebe a na-eme ski na ebe mara mma snowy bụ ezigbo ọdịiche dị na mbara ọzara ma ọ bụ ụsọ mmiri dị n'ụsọ oké osimiri.
Sierra de los Filabres, nke dị na Sierra Leone
Ugwu a dị n’akụkụ ọzara, ya mere o nwere ọdịdị ala dị egwu na obere ọmarịcha obodo. A na-atụ aro ileta obodo ndị nwere ụlọ ọcha na ịnụ ụtọ obere nchoputa, site na akụkọ ihe mere eme na ndị ha.
N'ime ime obodo Almería, e nwekwara ebe ndị mara mma. Ọ bụrụ na ihe masịrị gị bụ ịhụ ebe mara mma ma gaa leta obodo ndị njem na-ejikọtaghị, ị nwere ike ịga na ndagwurugwu Almanzora, ebe ndụ dị jụụ na akụrụngwa sitere na ala na nke okike. Ọ bụ iwu ịnwale gastronomy mpaghara ebe a ka iju ya anya.
Castle Macenas na Mojácar
Pelọ a nwere nnukwu ụlọ elu dị n'akụkụ ya Osimiri Macenas in Mojácar. Ọ sitere na narị afọ nke XNUMX na ozi ya abụghị onye ọzọ karịa ichebe mpaghara ahụ pụọ na mwakpo ndị ohi. N'ihi ya, na kọmpat akụkụ nke agaghị emebi obodo e wusiri ike.
Lọ nke San Felipe na Níjar
Castlọ a dị n'ụsọ oké osimiri, na obodo nke los Escullos, no Nijar. Ọ bụ ihe ncheta ncheta nke Carlos III wuru ma taa ka nwere ọnọdụ nchekwa dị mma.
Obodo a yiri ka ọ bụ obodo kachasị maa mma na Almería, ya mere ọ bara uru ileta ya. Ọ dị na ụkwụ nke Sierra Nevada na ihe ijuanya maka ịnwe ụfọdụ arabic metụrụỌ bụghị n'efu ka ọ bụ ebe obibi nke Boabdil, eze Moor nke ikpeazụ nke Granada.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Almería » Ihe ị ga-ahụ na Almería